प्रेरक-प्रसंग – ताजा समाचार
सफलता भनेको पैसा वा नाम मात्र कमाउनु हो ? नाम र दाम कमाए पछि के सबैथोकको खुसी मिल्छ ? यी कुराहरु हामीले जान्नु एकदमै जरुरी छ । किनकि आजकल मानिसहरु के सोच्ने गर्छन भने पैसा कमाए पछी संसारको सबै खुसी मिल्ने गर्छ । तर के पैसाले पारिवारिक खुसि किन्न सकिन्छ त ? सायदै सकिदैन होला […]
ढोँगी मान्छेले असल मान्छेको फेला पर्यो भने कसरी दुख पाउँछ भन्ने कुरा यो कथामा पाइन्छ । एउटा गाँउमा लोकरञ्जुन नाम गरेका एक अपढ तर चलाक ब्राम्हण थिए । उसको चलाकीबाट सबै गाउँलेका मनमा यी ब्राम्हण बहुतै विद्वान हुन भन्ने विश्वास परेको थियो । गाउँलेहरू कथा पुराण तिनै ब्राम्हणबाट सुन्थे । चतुर्मासका दिन गाउँमा देवीभागवतपुराण लागेको […]
पतिलाई खुसी देख्न चाहनुहुन्छ भने कहिले अपमान नगर्नुहोस्
विवाह एक अटुट सम्बन्ध हो । तपाइँको आफ्नो श्रीमानसंग कस्तो सम्बन्ध छ ? आफ्नो श्रीमानलाइ माया गर्नु हुन्छ ? ब्यक्त गर्ने सहि तरिका थाहा पाइराख्नु भएको छैन ? तपाइँको सानो सानो कारणले वा गल्तीले श्रीमानलाइ दुखि बनाइराख्नु भएको त छैन ? आफ्नो श्रीमानलाई माया नगर्ने श्रीमती को हुन्छ र ? तर माया देखाउने सहि तरिका […]
श्रेष्ठ पुरुषहरूले जे आचरण गर्दछन् अन्य पुरुष पनि त्यस्तै व्यवहार गर्छन् । महाभारत मानिस अनुकरणशील प्राणी हो । जो अगाडि छ उसैले समूहको नेतृत्व गर्छ । सिलर अरुको नक्कल नगर, आफूलाई चिन र आफू जे छौ त्यही बन । डेल कार्नेगी कुनै पनि मानिस अनुकरणबाट कहिल्यै महान बन्दैन । डा. जोन्सन आफैलाई आग्रह गर, अनुकरण […]
१. कमजोर मानिसले बदला लिन्छ, बलियो मानिसले माफी दिन्छ, बुद्धिमान मानिसले भुलिदिन्छ । – अल्बर्ट आइन्स्टाइन २. जिन्दगि छोटो छ यसैले नियममा बाधिएर नबस । माफ गर्न समय नलगाउ, न्यानो अंकमाल गर । साचो प्रेम गर । खुलेर हास अनि जसले तिम्रो मुस्कान छिनेर लान्छ त्यसप्रति कुनै पछुतो नगर । – मार्क ट्वेन ३. घृणाले […]
समयमै समय बदलिन्छ तर मानिस कहिले बदलिन्छ थाहा हुँदैन । आफू रुँदै जन्मेर अरुलाई रुवाउँदै मर्ने जात हो मान्छे । दु:ख होइन, परिश्रम गर्ने हो, सुख र मनोरन्जन त क्षणिक मात्र हुन्छन् । यदि प्रेममा भ्रष्टाचार हुन्थ्यो त सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारी तिमी ठहरिन्थ्यौ डियर । प्रेम भनेको ताल्चा र चाबी जस्तो होस्, ताल्चा नभए चाबी […]
जे व्यक्ति अरुलाई जित्छ उ बलियो बन्छ तर जो आफूला२ जित्छ उ शक्तिशाली । केही नजान्दा पनि मैले जानेको छु भनेर सोच्नु र देखाउनु रोग हो । मैले गरेको काम देखेर अरुले के भन्लान् भनेर सोच्छौ भने तिमी कैदी जीवन बाँचिरहेका छौ । अनावश्यक कुराहरू सोंच्न छोड्यो भने तिम्रा धेरै समस्याहरु आफै हराए जानेछन् । […]
१. पैसाको पछि मुर्खहरु मात्र लाग्छन बुद्धिमानले त काम खोज्छन काम, किनकी उनिहरुलाई थाहा छ कर्म नै पैसा हो । २. बदलिने मौसम, बदलिने सम्बन्ध र बदलिने मान्छे नदेखिए पनि महसुस अवस्य हुने गर्छ । ३. कस्तो चमत्कार छ यो प्रकृतिको; जिउदो मान्छे पानी डुब्छ र मुर्दा तैरीएर देखाउछ । ४. यो मृत्यु पनि बडो […]
हामी सबै एकअर्काको सुरक्षाका लागि मात्र जिम्मेवार छैनौँ । हामी केही हदसम्म एक अर्काको कल्याणका लागि पनि जिम्मेवार छौं । शिक्षाको सामान्य रुपमा अर्को नाम शान्ति निर्माण हो । खर्चको सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका शिक्षामा लागानी हो । सरकार र जनताले के बुझ्दैनन् कि कहिलेकाहीँ सामूहिक अन्तर्राष्ट्रिय हितको चासो पनि राष्ट्रिय चासो हो । आजको वास्तविक […]
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका ९ भनाइहरू
मानिस ठूलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन । कुनैपनि मानिसको सबै आत्मा बुझाउन सक्ने विद्या अहिलेसम्म निस्केको छैन । सत्यका लागि त्याग गर्न जसले सक्दैन उ कदापी वीर हुन सक्दैन । खराब चिजबाट पनि असल कुरा लिन सक्नु महानता हो । चुलीलाई ताक्नु, तिर्सना राख्नु र उचाइतिर लम्कनु नै पर्वतारोही हो । दर्शन भय हो कविता […]